IziCwangciso zikaYouTube eziBalulekileyo kwiMpumelelo yesitishi sakho-YTpals
Ukusukela oko yasungulwa ngo-2005, iYouTube iye yaba yeyona ndlela isetyenziswa kakhulu ekusingatheni ividiyo kwi-intanethi. Ukusukela ngo-2020, kukho ngeenxa zonke I-2.1 yezigidigidi zabantu kwihlabathi jikelele usebenzisa uYouTube. Oko kwaqala njengendawo yokugcina iividiyo ezikwi-intanethi iye yaba liqonga elinokubonelela abantu ngokukhula kwezinto eziphilayo ngeyona ndlela inokwenzeka. Ukuba uzimisele ukwenza umgudu ofunekayo kwaye usebenzise isicwangciso esilungileyo, nawe uya kufumana ukuvezwa okubonakalayo eqongeni. Eli nqaku liza kuphonononga iingcebiso ezintle kunye nezicwangciso zeYouTube eziya kubeka ijelo lakho kwindlela eya empumelelweni.
1. Ukudala umxholo othambileyo
Ukungaqondi kakuhle okuqhelekileyo malunga nokufumana impumelelo yeYouTube kukuba ukudala umxholo wentsholongwane kuphela kwendlela. Indlela abasebenzisi abasebenzisa ngayo iividiyo itshintshile kule minyaka imbalwa idlulileyo, kwaye ifomula yokudala iividiyo zentsholongwane ayisolona qhinga lilungileyo kwiYouTube. Nangona uninzi lomxholo ujongwe ngeefowuni eziphathwayo, oko akuthethi ukuba abantu bajonge iividiyo ezimfutshane kuphela ngeenjongo zokuzonwabisa. Kuba abantu abakhange bajonge ukonwatyiswa ekuhambeni, umda womxholo ongemva uyanda. Umxholo ongasemva ubhekisa kwiividiyo ezinde ezinokonwabisa, ezifundisayo, nezifundisayo.
Ukuba ufuna ukuba isitishi sakho siphumelele, enye inxalenye ebalulekileyo yesicwangciso sakho seYouTube kufuneka ibe yinto engaguqukiyo. Ukubambisana yinxalenye enkulu yokunyusa amanqaku evidiyo kwi-algorithm yeYouTube. Ingakunceda ukuba uzame ukungaguquguquki ekuthumeleni iividiyo kwaye uqinisekise ukuba uphuma nevidiyo entsha rhoqo ngeentsuku ezimbalwa. Oku kunceda ekubeni uhlale ufanelekile eqongeni. Kufuneka kwakhona uqinisekise ukuhambelana ngokwefomathi. Oku kunokwenziwa ngokubandakanya umxholo ophindaphindiweyo okanye ukusebenzisa abantu abafanayo okanye abalinganiswa. Ababukeli bakho baya kukwazi ukuba balindele ntoni kwijelo lakho ngokusebenzisa esi sicwangciso. Ngokuhamba kwexesha, ukuqhelana kuya kutshintsha kukunyaniseka.
3. Khuthaza abaphulaphuli bakho ukuba benze okuthile
Nabani na ongumnini wejelo likaYouTube uyakwazi ukubaluleka kokukhuthaza ababukeli bakho ukuba bathumele izimvo kunye nokuthanda iividiyo. Isicwangciso sakho sikaYouTube kufuneka sijolise ekwakheni abaphulaphuli abasebenzisanayo endaweni yabaphulaphuli abangenzi nto. Enye indlela yokukhuthaza ababukeli bakho ukuba bathathe inyathelo ngamakhadi kaYouTube. Amakhadi kaYouTube eza ngohlobo lwezaziso ezicwangciswe kwangaphambili ezinokukhomba ababukeli kwezinye iividiyo kwitshaneli yakho okanye iwebhusayithi yakho. Ngaphandle koku, izikrini zokuphela zingasetyenziselwa ukukhuthaza omnye umxholo.
4. Lungiselela umxholo wakho kukhangelo lukaYouTube
Ukuqinisekisa impumelelo yeYouTube kwitshaneli yakho, kuya kufuneka uqinisekise ukuba itshaneli lakho lifumana ukuvezwa okuphezulu. Ngelixa umgangatho womxholo kunye nokungaguquguquki kuya kukubeka kwindlela elungileyo, kubalulekile ukukhulisa umxholo wokunyusa umgangatho wawo Ukukhangela ku-YouTube. Unokwenza oku ngokusebenzisa amagama angundoqo kwisihloko, ngaphandle kokwenza iinkcazo ezintle kunye nokubandakanya iithegi ezifanelekileyo.
5. Cinga ngemizuzu emincinci yababukeli
Ukhetho lwababukeli kufuneka lube phambili kwaye lube sembindini xa kusenziwa iqhinga likaYouTube. Ukuba ufuna ukuhambisa umxholo ofanelekileyo kubabukeli, kufuneka ucinge ngemizuzu emincinci yababukeli xa bejonga umxholo. Oku kubandakanya ukujonga isizathu esinyanzelisa abantu ukuba bafune isihloko esithile eqongeni. Emva koko unokunqanda le nkqubo kwaye unikezele kwiimfuno zababukeli ngokudala umxholo abawufunayo.
Eyona njongo yesicwangciso sakho sikaYouTube kufuneka ibe kukwakha uluntu lwababukeli abathembekileyo eqongeni. Ngezi ngcebiso, unokuseta itshaneli yakho yeYouTube kwindlela eya empumelelweni. Unokongeza ezi zicwangciso zeYouTube ngokusebenzisa ezinye izixhobo ezibalulekileyo ezikhoyo YTpals. Unga thenga iiyure zokubukela zikaYouTube, enokunceda ukuqalisa isitishi sakho kwaye uphucule ukhangelo lwakho lukaGoogle kunye neYouTube. I-YTpals ibonelela ngoluhlu lweenkonzo zepremium zeYouTube ezinceda ukukhulisa amajelo eYouTube. Siqinisekisa ulwaneliseko olukhulu lwabathengi bethu ngokubonelela ukuba ukuhanjiswa kuhlala kungaphezulu koko kuyalelwe. Iinkonzo ze-YTpals nazo ziza ne-100% yesiqinisekiso sobumfihlo kunye nokhuseleko. Ukwazi ngakumbi malunga neenkonzo zethu, qhagamshelana nathi namhlanje!
Izicwangciso zeYouTube eziBalulekileyo kwiMpumelelo yesitishi sakho ngababhali beYTpals, 7 January 2022
Ukuhlelwa kweYouTube kusilele rhoqo kwiimfuno zeMarket
Ngaphezulu kwe-2 yezigidigidi zabantu kwihlabathi liphela basebenzisa iYouTube ukubukela iividiyo zazo zonke iintlobo. Akumangalisi ukuba kutheni abantu abaninzi befuna ukufikelela kwaba baphulaphuli bakhulu ngokuba yi-YouTubers. Nangona kunjalo, ukuba…
Iimpazamo ezi-5 eziqhelekileyo Iindlela ezintsha ze-YouTube zenze
I-YouTube ingaphezulu kweqonga nje lokwabelana ngeevidiyo- yindawo eye yasungula imisebenzi emininzi. Ukusuka kwiimvumi ukuya kubahlekisi ukuya kubaphembeleli, ukuba yi-YouTuber kuzise impumelelo enkulu kubantu abaninzi kwaye…
IYouTube lelona qonga lisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, elenza libe namandla kakhulu ekudluliseleni imiyalezo ebalulekileyo. Iividiyo ezikuYouTube zinamandla okubumba inkcubeko kunye nefuthe kuluntu…